6 marudzi ematafura emubhedha kuti ape imba yekurara | Bezzia
Maria vazquez | 30/04/2021 18:00 | Simba
Nzvimbo dzehusiku chikamu cheboka iro remidziyo iyo tinofunga zvakakosha mukamuri yekurara. Ivo vabatsiri vakuru kuti vawedzere inzvimbo yekuchengetera yekurara uye zvakakosha kuti zvivepo pazvinhu zvese izvo zvatingangoda patinoenda kunorara nekusimuka.
Ndezvipi zvinhu zvaunoshandisa usati warara uye paunomuka? Ndezvipi zvimwe zvinhu kunze kweizvo zvaungade kuti ugone kuronga pahusiku hwehusiku? Dzidza zvaunoda, sarudza iwo masitayera ehusiku hwehusiku anonyatsokodzera aesthetics yekurara uye sarudza iyo inonyatsoenderana nezvido zvako.
2 Nordic yakafuridzirwa
3 Yakasarudzika uye yakaomesesa maitiro
Mafashama ehusiku anoyangarara ndiyo imwe nzira yakanaka ye shongedza nzvimbo diki. Kana iwe usina nzvimbo yakawanda kune ese mativi emubhedha kana iwe usiri kuda kumutsiridza mukamuri nefuriyumu fenicha, aya anova mubatsiri mukuru wezvikonzero zvakasiyana:
Ivo vakajeka mwenje. Ivo vanowedzera kunzwa kwekupamhama mukamuri mavakaiswa.
Vanotora nzvimbo diki. Saizi yemhando zhinji dzinoyangarara dzinokutendera kuti uzviise munzvimbo diki uko tafura yakajairwa isina nzvimbo.
Vanobvumira kuchenesa pasi zvakanaka. Izvo zvakasungirirwa kumadziro zvinovatadzisa kufamba. Nekudaro, vachikwidziridzwa, ivo vanofambisa kuchenesa kwemazuva ese kwekamuri.
Ivo vakashongedza kwazvo. Nekumira kunze kwematafura echinyakare, ivo vanopa mukamuri iko kwekutanga kubata.
Tafura dzematanda dzinoyangarara nhasi dzakakurumbira kushongedza imba yekurara nekuda kwekudziya kwavanounza kwavari. Kunyangwe avo vane minimalist dhizaini mune yakajeka toni: vachena, mafuta, grey… tora nzvimbo yepakati mumakamuri ekurara neazvino maesthetics. Unogona kuvawana nedhirowa rimwe kana maviri kuti vawedzere kugona kwavo uye / kana nemwenje wakavakirwa kuitira kuti zvive zvisina basa kuisa mwenje pairi.
El nordic maitiro Izvo zvave kuva mumakore gumi apfuura muyedzo mukati mekugadzirwa kwemukati. Kubatanidza huni hwepanyama nechena ruzivo, matafura echitaera ichi anounza mwenje nekudziya kumakamuri ekurara emhando dzakasiyana. Pamakumbo mana, ivo vanowanzo kuve nedhirowa rimwe kana maviri ayo anozokutendera iwe kuve nezvinokosha padyo nemubhedha.
1. Imba yeNunila-Kave, 2. Sklum, 3. Larsen-Yakagadzirwa, 4. Sklum
Yakasarudzika uye yakaomesesa maitiro
Elegance uye kusanzwisisika zvinotsanangura maitiro eimba yako yekurara? Kana zvirizvo, matafura epadivi pemubhedha anozokwana zvakakwana mariri. Izvo zvinobatanidza a chena chena nezvinhu zvegoridhe Iwo ndiwo anozivikanwa kwazvo ekushongedza dzimba dzekurara nemadziro machena, masiringi akakwira ane kuumbwa uye mahwindo mahombe.
Matafura madiki naMade uye Ikea Kubata kwazvino uno, zvakadaro, kunopa imba yekurara iyo nhema mavara magadzirirwo yakatwasuka maumbirwo uye minimalist maitiro. Iwe unotsunga neruvara here? Dhizaini inosanganisa maumbirwo, mitsara uye makakombama, senge Made's, zvinopa yako yekurara muyero pakati pechinyakare neazvino
Maindasitiri maitiro emubhedha matafura kazhinji zvine simbi simbi. Mamwe akafemerwa nekugadzirwa kweaya masimbi esimbi akashandiswa kare mumaindasitiri, zvipatara kana mayunivhesiti, kunyangwe achiwanzo gadziridzwa aine mamwe maumbirwo akakomberedzwa uye neruvara.
1. Savoi-Kave Kumba, 2.Bavi-Sklum, 3. Trixie-Kave Kumba, 4.Nikkeby-Ikea, 5.Kluis-Miv Interiors Zvakajairika kuwana zvigadzirwa izvo. sanganisa simbi nehuni kuitira kuti uwane zvinodziya dhizaini. Izvo zvakanyanya zvakasikwa uye zvakaomarara zvinhu izvi, zvakanyanya kuwanda kwemaindasitiri maficha. Kunyanya homogeneous uye yakabwinyiswa, ivo padyo padyo neazvino aesthetic.
Kuti upe rudo rwekurara kuimba yako yekurara, haugone kuwana mubatsiri ari nani pane iwo mahusiku ehusiku anoita kunge achangobuda mukamuri raambuya vako. Dhizaini dzakatendeuka makumbo, mitsara yakakomberedzwa uye yakabviswa machena machena isarudzo huru, kunyangwe isu tisingatongere avo vane pajira riya ukomba kana cannage.
1. Ikea, 2. Vilmupa, 3. Kave Kumba, 4. Vilmupa
Ivo havana kukudzwa kumwechete nehusiku hwehusiku hwemakona mana uye isu hatitende kuti havazombove nahwo, asi ivo iri inowedzera inofarirwa sarudzo. Kazhinji inogadzirwa mukati lacquered huni mumatoni matoni kana nekupenya, vane simba rakakura rekushongedza.
1.Kurb-Kave Imba, 2. Odie Yakagadzirwa, 3. Cairn-Yakagadzirwa, 4. Baberi 02-Sklum
Kutarisa kureruka, ivo vanogona kutipa isu anosvika matatu madhiri kuchengeta zvinhu. Nekudaro, izvi zvingangove zvisingaite sevaya vane maumbirwo akaenzana. Sei? Nekuti zvinonyanya kuoma, kupihwa chimiro chayo, kutora mukana wekuchengetedza nzvimbo yavanotipa.
Ndeupi rudzi rwehusiku hwehusiku hwaungasarudza kupa yako yekurara?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Simba » 6 marudzi ematafura emubhedha ekurara yekurara